BitBronze စျေး - အွန်လိုင်း BRONZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitBronze (BRONZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitBronze (BRONZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitBronze ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitBronze တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitBronze များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitBronzeBRONZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00584BitBronzeBRONZ သို့ ယူရိုEUR€0.00498BitBronzeBRONZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00448BitBronzeBRONZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00537BitBronzeBRONZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0528BitBronzeBRONZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0371BitBronzeBRONZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.13BitBronzeBRONZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.022BitBronzeBRONZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00779BitBronzeBRONZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0082BitBronzeBRONZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.131BitBronzeBRONZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0453BitBronzeBRONZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0314BitBronzeBRONZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.436BitBronzeBRONZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.989BitBronzeBRONZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00803BitBronzeBRONZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00892BitBronzeBRONZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.182BitBronzeBRONZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0406BitBronzeBRONZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.623BitBronzeBRONZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩6.93BitBronzeBRONZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.27BitBronzeBRONZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.428BitBronzeBRONZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.162
BitBronzeBRONZ သို့ BitcoinBTC0.0000005 BitBronzeBRONZ သို့ EthereumETH0.00002 BitBronzeBRONZ သို့ LitecoinLTC0.000109 BitBronzeBRONZ သို့ DigitalCashDASH0.00007 BitBronzeBRONZ သို့ MoneroXMR0.00007 BitBronzeBRONZ သို့ NxtNXT0.473 BitBronzeBRONZ သို့ Ethereum ClassicETC0.000872 BitBronzeBRONZ သို့ DogecoinDOGE1.75 BitBronzeBRONZ သို့ ZCashZEC0.00007 BitBronzeBRONZ သို့ BitsharesBTS0.227 BitBronzeBRONZ သို့ DigiByteDGB0.195 BitBronzeBRONZ သို့ RippleXRP0.021 BitBronzeBRONZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000205 BitBronzeBRONZ သို့ PeerCoinPPC0.0203 BitBronzeBRONZ သို့ CraigsCoinCRAIG2.71 BitBronzeBRONZ သို့ BitstakeXBS0.254 BitBronzeBRONZ သို့ PayCoinXPY0.104 BitBronzeBRONZ သို့ ProsperCoinPRC0.747 BitBronzeBRONZ သို့ YbCoinYBC0.000003 BitBronzeBRONZ သို့ DarkKushDANK1.91 BitBronzeBRONZ သို့ GiveCoinGIVE12.9 BitBronzeBRONZ သို့ KoboCoinKOBO1.36 BitBronzeBRONZ သို့ DarkTokenDT0.00538 BitBronzeBRONZ သို့ CETUS CoinCETI17.19
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 04:35:02 +0000.